Indonesia in Focus: Ibliisku xariif Si taxaddar leh u khiyaanayn dadka.
Ibliisku xariif Si taxaddar leh u khiyaanayn dadka.
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (352)
(Qaybta saddex boqol iyo laba iyo konton), Depok, West Java, Indonnesia, August 21, 2015, 07:00 pm).
Ilaah eraygiisa Aayaadkanaga 5-6 warqad Fatir ka digay dadka in Shaydaanku waa colkiin ee nin waa mid aad u halis ah.
Devil, Ilaah wuxuu yidhi, aad u wanaagsan ee wax khiyaaneeya nolosha aadanaha duub adduunka.
Iyada oo baakad nolosha adduunyo Shaydaan sii inay soo xero geliso dadka, si ay dadku u sii wadaan in ay sinaysan si Ibliisku wuxuu ku leeyahay dad raacsan si ay deggan cadaabta weligeed ah la Yag.
Waxaa jira been badan oo ka mid ah Ibliiska nin, ka damaca waayo, xoog, xoolo iyo siyaasadda, kaliya fiiri dagaalka ka dhacay wakhtigii boqortooyadii ee la soo dhaafay, dagaalladii ka dhacay qarnigii ka Dagaalkii Adduunka, War 2, ciidamada shaqo World Hitler ( Germany) ee Yurub iyo Africa, ciidamada Mussolini (Italy) ee Africa, ciidamada gumeysiga Hirohito (Japan) ee Asia, Dagaalkii Kuuriya, dagaalkii Vietnam, dagaalka Falklands ah, dagaalka Eastern Ukraine, dagaalka Afghanistan, dagaalka ee Waqooyiga Africa, Middle East , Ciraaq, Suuriya iyo dagaalka Yemen kaas oo sababay dhimashada dad badan iyo dhaawacyada dadka rayidka ah iyo ciidamada labaduba, dad badan oo dhibaato gaajo badiyay guryahooda iyo burburinta beeraha dhul / leexsan, taasoo keenaysa dillaaca cudurka iyo Gaajo, iyo sidoo kale socodka oo waaweyn barakaca baaxadda dhulweynaha Africa Yurub (inta badan qaxootiga Suuriya, Ciraaq iyo Africa), oo aan ku xuso dadkii ku barakacay Rohingya Muslimiinta in ay ka Myanmar in dalalka koonfur Asian.
Trick A in Ibliisku sidoo kale nin Waalan jecel yahay maandooriye khatar ah, sidoo kale sigaar (sigaarka) oo sidoo kale in kastoo si tartiib ah ayaa sidoo kale dami ah (ismiidaamin). Fatwa soo saaray Muhammadiyah Indonesia iyo Culimada of Saudi Arabia in sigaarka ku salaysan yahay qawl ah in ay jirto in Quraanka iyo Sunnaha (Xadiiska) waa arrin oo wuxuu ku yidhi Ustad Abu Yahya Badrussalam, an ka qalin sunnah khabiir ku ah Jaamacadda Islaamiga ah ee Madiina, Saudi Arabia, dhawaaqay sigaarka in uu miisaanka waaya'aragnimo factor dembi aakhiro. Markaasaa Ibliisku wuxuu ku sidoo kale qeexay nin la samada dhulka oo ah qaab sakhraannimo ku farxay lagu caweeyo, xitaa dhooqeeyay daawooyinka, sidoo kale waa jeclaan sinada (galmada xaaskiisa ama ninkeeda aan la).
Waxaa jira kumanaan sinaysta kale labada miyir, ama isag aadanaha, ay sabab u tahay trick oo ah Ibliiska nolosha dunida.
In kastoo hadalka Nabi Muxammed, qiimihiisu nolosha dunida ee Eebe agtiisa ku ah waa in aan ka badnayn garabka kaneecada, xitaa ka sii badan Arrimaha Didabadda badan bakhtigii ah dhegaha kid naafada ah.
Nabiga ninkii adduunka ugu waa Jannada ah gaalada (sino Khamrada / la cabo), iyo xabsi ah kuwa rumeeyey (waa inay dulqaad muujiyaan in cibaadada iyo samir in laga fogaado falal akhlaaqda), si ay u noolaadaan nolosha dhabta ah ee Aakhiro (waari digay ).
Quran Surat Al-Fatir, aayadda 5-6 ..
"O nin! Waa yabooha Eebe Xaq yahay, sidaa sameeyaan nolosha adduunka ee khiyaanayn aad iyo sii (Ibliisku / Shaydaan) trick in xariif ah, idinkudhagrin Eebe ku dhagris.
Indeed, Ibliiska colkiin ee idinna col, ka dibna isaga daaweeyo sidii cadow oo kale, waayo, jinniyo dhabta qaaday Koox oo kaliya in ay dadka deegaanka u noqotay yagg cadaabta dab ah. "
Waxaan ognahay in mid kasta oo ka mid ah waxay leedahay cadow weyn? Cadow dhab ahaantii naga dooneyso dhumiyey oo ay wax yeelaan. Oo cadowga aan la arki karo, laakiin waxa ay leedahay wax badan oo khiyaamo iyo sida ay u gaarto himilooyinkeeda ay. Syaithan Taasi (jinniyo).
Allah Subhanahu wa imtithaal ayaa uga digay dadka in aan la fidmeeyey,. Ilaahay wuxuu leeyahay,
Wiilka Aadamow, ma aad waligaa laydin khiyaanayn Shaydaanku, sidii uu ku guulaystay in uu ka saareen labada aabbe iyo hooyo ee samada. [Al-A'raf / 7: 27]
Sidaa darteed, naxariistiisa by, Alle ku amray ninkii syaithan sameeyo Col. maxaa yeelay, dhab ahaantii, cadowga aadanaha ee syaithan. Ilaahay wuxuu leeyahay,
Shaydaanku waa idiin yahay col cad, sidaas darteed waa Col (mu), waayo, runtii Ibliisku-Ibliisku waxa keliya oo uu xisbiga Yeedhi waxa laga yaabaa inay Ehelka Naarta Saciira sameeyo. [Fatir / 35: 6]
Sidee taakal dhinaca cadaawayaashiisa? Qof walba hore ayuu u ogaa jawaab la dayaynaa inaan la overwritten kooxaha loo eegin oo dhan sidooda iyo wanaaggiisa.
Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah inuu ka hadlo aayadda kor ku xusan, "Eebe wuxuu idin fari Col syaithan taasi ka dhigi doonaa sida digniin ah in (dadka) ku isticmaali karto awoodda wax ay ula dagaallamaan si ay ula dagaalamaan. Syaithan waxay noqotay sidii cadow oo kale in iskama daayo oo aan marnaba ku fashilantay ". [Zadul Macaad, III / 6]
In fulinta dhumiyaan tallaabada iyo baabbi'in dadka, syaithan leeyahay in uu shaki ku jiro iyo damaca laba gacmood. Sidaa darteed, kuwa doonaya in ay u noolaadaan waa in ay ahaadaan jihaadka ka dhanka ah syaithan hubeysan sayniska iyo mentazkiyah (nadiifinta) Naf. Nafi Sciences '(kaas oo ah mid waxtar leh) soo saari doonaa isku-kalsooni ku qaba, oo ay diidi doonaan inay shaki ku jiro. Iyadoo nafs tazkiyatun ku dhali doontaa; taqwada iyo dulqaad, taas oo ka dhigaysa in ay awoodaan in ay gacanta ku timid damaca jidhka.
Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah yiri, "Jihad ka dhan ah syaithan leeyahay laba heer: Marka hore, gaaloobay shaki iyo shaki lagu tuuray addoonkii syaithan; Labaad, diiday damaca iyo dooni fool xun addoomadiisa syaithan tuuro. Jihad ugu horeysay in dhamaan doonaa xukunka ah, halka jihaadka labaad ku dhamaan doonaa samir. Ilaahay wuxuu leeyahay,
Waxaana ka yeellay u dhexeeya in madaxda ku Hanuuniya Amarkanaga markay samreen. Oo waa ay Rumeeyey Aayaadkanaga. [As-Sajdah / 32: 24]
Diimaha Alle wax ku wacdiyo hoggaanka in kaliya lagu gaari karaa samir (iyo keyakinaan), dulqaad iska caabin doonaa damaca iyo dooni fool xun, oo aaminsan diidi doonaa shaki iyo shaki. "[Zadul Macaad III / 10]
Sidaas aadanuhu ka dhanka hubka syaithan waa aqoonta iyo samir. Science laga kala ah Qur'aanka iyo Sunnaha oo. Markaas sayniska si ay nafta nadiif ah iyo daahir noqon, iyo horumarinta samir.
Taas ayaa ah sida in ay la kulmaan sasabidda Shaydaanka mid caalami ah, halka faahfaahin waa sida soo socota:
1. Diinta Eebe Mentauhidkan habboon
Illeen xoogga oo dhan, iyo xoogga, si kaamil iska leh oo kaliya in ay Alle. Sidaa darteed, anigoo addoonkaaga ah kuwaas oo ka caawiyey iyo ilaaliyo Eebe, waxba ma awoodi doonaan in wax la yeelo iyada. Tani waa hubka ugu horeysay oo aasaasiga ah ee Mu'min ah wejiga syaithan in uu yahay mid aamin ah si run Eebe, ee caabud daacadda, trust kaliya oo keliya isaga oo camal fiican falay sida ku cad shuruucda uu. Ilaahay inuu wax ku wacdiyo syaithan oo aan haysan awood ay addoomadiisa rumeeyey Eebe iyo mentauhidkan uu. Eebana wuxuu sheegi.
"Run ahaantii, Ibliiska hananayn ka badan kuwa rumeeyey xaqa oo isku halleeya oo kaliya Eebihiis. [An-Nahl / 16: 99]
Ibn al-Qayyim rahimahullah yiri, "Marka Ibliisku wuxuu ogyahay in uu leeyahay (jid lagumaleh odaygii) dadka u naseexeeyaan, oo wuxuu iyaga uga reebay ka dhaarta ah shuruud ay u marin habaabiyaan iyo baabbi'in (aadanaha). Ibliisku wuxuu ku yidhi,
"Si ay u badbaadiyaan awoodda, waan baadiyeyn dhamaantood, marka laga reebo addoommadaada ah waannu oo Ikhlash [Shad / 38: 82-83]
Ilaahay wuxuu leeyahay,
Bal eeg addoommadayduna waxay xujo ahna idinkuma lahayn (Shaydaan) iyaga ka gees ah si ay u, dadka aad la raaco, dadka dhumiyey mooyee. [Al-Hijr / 15: 42]
Sidaas daacad ah waa habka xoriyada, Islaamku waa gaari badbaadada, iyo iimaanka waa cover ammaanka ah. [Al-'Ilmu, Fadhluhu Wa Syarafuhu, p. 72-74, tansiq: Sheikh Ali bin Xasan Al-Halabi]
2. walbo aad Kitaabka iyo Sunnaha garashada ee As-Saalax Salafush
Marka Alle xaqiro dadkuba Dhulka, Eebana waxaa ka mid ah tilmaamaha iyaga u. Sidaas in dadka ku nool dunida ah waa la aan keligay baa hadhay, oo aan hanuun, amarradiisa iyo reebay. Ilaahay hoos Qorniinka iyo diray Rasuulladu waxay xambaarsan digniin, sharaxaad iyo caddayn. Ruuxii uga noqon Eebe, ka dibna u dhici doonaa syaithan la dhaco iyo hoos shil weligeed galay. Allah Subhanahu wa imtithaal.
"Kuwa ka jeedsan waxbaridda Eebaha Naxariista (al-Quraanka), waxaan qabtay shaydaan (habaabin), markaasaa Ibliisku in uu yahay saaxiib ah in had iyo jeer waxa uu weheliyo. [Az-Zukhruf / 43: 36]
Sidaa darteed, ka badbaaday syaithan dulanka waa in ay raacaan Jidka Eebe, raacaan Kitaabka iyo Sunnaha la salafush fahamka sida-Saalax. Ilaahay ayaa sheegay,
"Ruuxii Khilaafa Rasuulka ka dib markii runta cad isaga, raacna Jidka in sida ma aha Mu'miniinta (ie Ehelkeeda ah), waxaan isaga si xor ah ha in ay khaa'imiin yihiin in uu u guuleysto oo aan geli jahannamo, oo jahannamo in xun meel -buruknya dib. [An-Nisa '/ 4: 115]
3. magan gal Eebe Xanuunka syaithan.
Tani waa sida ugu fiican ee jidka loo maro isbadbaadi ka syaithan oo askari, xaggiisa waswaasiye ka magangal Eebe Ilaaha Qaadirka ah, waayo, isagu waa ka maqlaya, ee Og Agtiisa iyo Qaadirka.
Imam Ibn Kathir rahimahullah yiri, "oo macnaheedu yahay" Waxaan waswaasiye ka magangal Eebe ka syaithan inkaaran "in aan u ilaalin Eebe ka syaithan weydiin ah waa La Lacnaday in igu taagnaa on my diinta, ama in aan dunida, ama iga hor istaagi wax samaynaya oo la amray (Ilaaha Qaadirka ah) igu , ama i dhiirri-galiyay in ay sameeyaan waxa ii reebay. Maxaa yeelay, cidna ka hortagi kara syaithan aadanaha Eebe mooyee.
Sidaa darteed, Eebana Ilaaha Qaadirka ah ku amartay in ay qaataan wadnaha iyo inuu ahaado mid si syaithan aadanaha, oo ay wax wanaagsan u sameeyo, si tabi'atnya (wanaagsan) diido faragelinta (oo uu ku sameeyey).
Eebana amar ku bixiyay in (aadanaha) isaga isku halleeya oo ka syaithan Jinni, maxaa yeelay, isagu ma aqbali laaluush iyo ficilada naxariis ma u saamayn doonaan, maxaa yeelay, isagu wax shar ah tabi'at, oo sinaba uma ay ka hortagi doonaan in aad ka haddii Yang ayaa abuuray. "[Tafsir Ibn Kathir, 1/14, publisher: Darul Jiil, Beirut,-kiisa]
Dhumey ilaalinta waxaa lagu qabtaa guud ahaan waqti kasta, wax kasta oo ay ragaadisay syaithan, iyo sidoo kale waqtiyada qaarkood dituntunkan by Eebe iyo Rasuulkiisa.
Oo haddii aad overwritten wax lay jirrabayay Shaydaanka, ka dibna xaggiisa waswaasiye ka magangal Eebe. Indeed, waana Maqle Oge ah. [Al-A'raf / 7: 200]
Sida waqtiyada qaarkood dituntunkan in ay ka mid yihiin, markii ugu rabshaysan syaithan beristi'adzah; Ruuxna, shar jiro, qallafsanaa ee Salaadda, marka cadhoon; qarow; akhriyi doonaa Quraanka; geli doono masaajidka; geli doonaan xaaridda ah; Goortuu maqlay baroortii eeyaha iyo sawdka ka dameer; marka berjima doonaa '; aroortii iyo galabtiiba, isti'adzah carruurta iyo qoysaska; marka meel la joojiyey; marka seexan; iyo kuwa kale. Details of dood yihiin oo dhan ku jira ee xadiis dhab ah.
4. Akhriska Quraanka
Illeen syaithan ay baxsan maxaa yeelay, akhriska Quraanka, sida in xadiiska sida soo socota:
Laga soo bilaabo Abuu Hureyrah in Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri: Ha guryahooda ka samaystaan aad sida xabaalo, syaithan dhab ahaantii meel ka baxsan gurigooda oo akhriyey Suurad Al-Baqarah waxa ku jira "orday. [HR. Muslim, no: 780]
Syaithan ayaa mid ka mid qarsoodi ah u furay si ay Abu Hureyra, in ay xaq ku Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii. Syaithan yiri:
"Haddii aad sariirta mashquulin, markaas fadlan akhri kuraasta baaragaraafka (LAA ilaha Illa Allohu huwal hayyul qayyuum) ilaa aad dhamaysato aayadda, markaas hubaal mar walba noqon doonto ilaalin Eebe, iyo syaithan aad u Dhawaanina doonaa ilaa aad ka hesho in subaxdii". [HR. Bukhaari]
5. In la kordhiyo Dzikrulloh.
Dzikrullah waa qalcaddayda aad u xoog badan in ay naftooda ka syaithan faragelinta ilaaliyo. Waxaa la og yahay ka hadalka ku saabsan Allah Subhanahu wa Ta'alaewat Rasuulladiisa, iyo kuwo kale, iyada oo afka Nabiga Yahya Alaihissallam, sida xadiiska hoos ku qoran:
Al-Harith Al-Ash'ari, in Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri: "Runtii, Eebe amray Yahya bin Zakaria q leh shan weedho, si ay u sameeyaan iyo waxa uu amar ku bixiyay in Banii Israa'iil inay sameeyaan (kuwo kale) ..." aan idinku amrayo u dhikrullah (xusuuso / xuso Eebe). Illeen masaal, sida masaalkii nin la raaciyey cadaawayaashiisa si deg deg ah, si haddii uu u yimid in ay qalcaddayda xoog leh, oo iyaga ka uu iska nabadgeliyey (hoy qalcaddii). Addoon noocan oo kale ah ma awoodi doonaan in ay nafteeda ka syaithan ilaaliyo mooyee xasuus Ilaah ". [HR.Ahmad]
Sidaas darteed haddii aad rabto in aad si ay u noolaadaan syaithan dhagar iyo kala go'ii, ha carrabka mar walba qoyan oo diirada lagu in dhikrullah beerka la socda ee.
6. wada joogaan dadka Jamat Muslim ah
Ku biir shirka Muslimiinta fulinteeda noocyo kala duwan oo cibaadada la dituntunkan shirka, waa mid ka mid hab ay naftooda ku badbaadin ka syaithan bartilmaameedka. Sababtoo ah syaithan dhabta ah waa yeey oo ka faa'iideysato fursad doonaa nin, sida yeey weerari doonaan menyempal oo ido ah oo ka tirsan kooxda.
From Abu Dardaa ', ayuu yiri: "Waxaan maqlay Nabiga Sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:" Waxaa jira saddex qof oo ku nool tuulo ama beeraha, ma aasaasay shirka ay salaadda, syaithan iyaga u yaqaaniin haddii. Sidaas biiro shirka, sababta oo ah in Yeeyi Cunto dhab ah cuni doonaa waxar oo keliya ". [HR. Abu Dawood, no: 547]
7. oge syaithan awood Tipu-Sidaas daraaddeed ku.
Syaithan ahaa dadka marin habaabin ah mid aad u xamaasad leh, ayuu waqti iyo awood uu la geeyay si ay u wiiqaan aadanaha oo dhan ku qaatay. Alle ka digay addoomihiisa ah kuwa rumeeyey oo aan cadowga ka dhimanaya erayga:
Kuwa xaqa rumeeyow, hana raacina Waddooyinka Shaydaanka. Ciddii Raacda Waddooyinka Shaydaanka, Ibliiska ayaa la sheegay sameeyo fal dhab foosha xun iyo waxa qaldan. [An-Nuur / 24: 21]
Mid ka mid ah habka si looga fogaado syaithan khiyaano waa oge kala furfuraan khiyaanada waxa si looga hortagaa. Maxaa yeelay, dadka aan ogahay xumaanta, uu si fudud u dhici doonaan la quudhsado oo kale lama dareemo.
8. menyelisihi syaithan iyo iska ilaalinta khiyaanada ah Means-maaddooyinka loogu aadanaha.
Syaithan waa cadowga nin. Sidaa darteed, waa in aan iyaga dhig sida cadowga. Ilaahay wuxuu leeyahay,
Dadow, yabooha Eebe waa xaqe, oo markaas ayan weligood ha nolosha dunida aad dhagar ahayn, oo mar ma ha Ibliiska in trick xariif ah, idinkudhagrin Eebe ku dhagris. [Fatir: 5]
Waxaa ka mid ah xaqiijinta kor ku xusan waa inay wax ka qabtaan syaithan menyelisihi. Tusaale ahaan:
• syaithan wax cunaya oo cabbaya gacantiisa bidix kula, ka dibna isaga selisihi inay wax cunaan oo gacanta midig cabbaan.
• syaithan sameeyey qoilulah (nasashada duhurkii), ka dibna waxaan selisihi by qoilulah.
• Ha ku xadgudba (tabdziir) sababtoo ah dadka samayn tabdziir waa saudarasyaithan.
• Sameynta wax aamusnaan iyo si taxadar leh, sababta oo ah dareenka ah Dadka Deg deg ka syaithan.
• Ha noo sameeyaan dadaal kasta si aanay u uumi, sababtoo ah waa ka syaithan.
Ayaa dood in aynu u sheegnay in this, ka koobnaa xadiis dhab ah.
Music, hees iyo khamer: Waxaa ka mid ah xaqiijinta cadaawad syaithan waa meel ka baxsan habka loo isticmaalo syaithan, inuu Dhumiyo Dadka, sida uu yahay.
9. hubiyo in Khiyaano syaithan daciif u ah
Allah Subhanahu wa imtithaal:
Hubaal dhagarta Shaydaanku waa mid daciif ah. [An-Nisa ': 76]
Si kastaba ha ahaatee u danbeysay ciyaarta faafin syaithan ku-dabin dabin, waa in aan hubiyo in syaithan ah xagga dulanka dhabta ahaa mid daciif ah. Waa in aynu mar walba Adeeca Eebe Ilaaha Qaadirka ah. Waxaa ka mid liitaa kuwaas oo syaithan:
• Waxa uu qofku uusan furi karin albaab xiran, oo ay la socdaan Salaadda (Magaca Eebe).
• Waxa kale oo uu cuni karin dadka ku odhan bismillah markii ay doonayeen inay ku cunaan.
• Mana qarashgareyn kartaa habeenkii guriga soo galeen oo ay deggan, halka akhriska salaadda ah
10. Taubat Iyo Istighfar.
Inkasta oo uu weli nool yahay, dadka mar walba u baahan tahay in ay toobad keenaan, iyo Dambi Dhaaf in Ilaaha Qaadirka ah, Qisadii in xadiis doondoonaan,
From Abu Saciid Al-Khudri, wuxuu yidhi anigu waxaan maqlay Rasuulka sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri: "Markaasaa Ibliisku wuxuu ku yidhi Robbnya:" Si ay u badbaadiyaan ammaan iyo weynaan, had iyo jeer caruurta Adam waan khiyaanayn doonaan ilaa iyo inta ruuxa weli waxaa iyaga in ". Markaas Eebe ku yidhi: "Wixii aawadood oo ah ammaan iyo weynaan, mar walba waan u dhaafi iyaga, waayo, waxay ku baryaynaaye, waayo, naxariis iga siiyey". [HR. Ahmad]
Halkan warbixin yar oo ku saabsan syaithan iyo hokey-soo oogay, waxaa laga yaabaa in faa'iido u dhan oo inaga mid ah. Aamiin. Wallahul Musta'an.
[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 02 / Year XV / 1432H / 2011. Published Lajnah Foundation Istiqomah Surakarta, JL. Solo - Solo Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo 57 183 Tel. 0271-858197 Fax 0271-858196]
Posted by needsjobslowongankerja at 4:12 PM